Umatshini ogcwalisiweyo weSirinji (kubandakanya isitofu sokugonya) abavelisi kunye nabathengisi | IVEN
Umgca ogqityiweyo weSirinji Production Line-PFS
Yintoni iSirinji ekhethiweyo?
Okwangoku, isizukulwana sokuqala sayo yonke isirinji yegilasi besingasetyenziswanga kangako. Isizukulwane sesibini esilahlwayo esirinjiweyo esirinjiweyo sisetyenziswa ngokubanzi kwihlabathi. Nangona inezibonelelo zexabiso eliphantsi kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo, ikwanazo neziphene zayo, ezinje nge-asidi kunye nealkali ukumelana, ukuphinda kusetyenziswe kwakhona kunye nongcoliseko lwendalo. Ke ngoko, amazwe ahambele phambili kunye nemimandla ngokuthe ngcembe ikhuthaze ukusetyenziswa kwesizukulwana sesithathu seesirinji ezizalisiweyo. Uhlobo lwesirinji yokugcwalisa kwangaphambili inemisebenzi yokugcina amayeza kunye nenaliti eqhelekileyo ngaxeshanye, kwaye isebenzisa izixhobo ngokuhambelana okuhle kunye nozinzo. Ayikhuselekanga kwaye ithembekile kuphela, kodwa iyanciphisa nabasebenzi kunye neendleko kwimveliso oyisebenzisayo ukuya kuthi ga kumlinganiselo omkhulu xa kuthelekiswa "nesirinji yamayeza" yesiko, ethi izise izibonelelo ezininzi kumashishini amayeza kunye nokusetyenziswa kweklinikhi. Okwangoku, amashishini amayeza aya esanda kwaye asetyenziswa kunyango. Kwiminyaka embalwa ezayo, iya kuba yindlela ephambili yokupakisha iziyobisi, kwaye ngokuthe ngcembe ithathe indawo yenqanaba lesirinji eqhelekileyo.
Yintoni iimpawu zesirinji ezizalisiweyo?
Njengohlobo olutsha lokupakisha iziyobisi, isirinji ekhethiweyo ibonakaliswa ngu:
(1) Ukusebenzisa iglasi ezikumgangatho ophezulu kunye neerabha izinto, ezinokuhambelana okuhle neziyobisi kwaye zinokuqinisekisa uzinzo lweziyobisi ezipakishwe;
(2) Ukunciphisa inkunkuma ebangelwe kukufakwa kwamachiza kwintengiso ngexesha lokugcinwa kunye nokudluliswa, ngakumbi kumalungiselelo exabiso ezinto eziphilayo;
(3) Ukuthintela ukufunxa okuphindaphindiweyo emva kokusetyenziswa kwezinciphiso kunye nokunciphisa ithuba lokungcola okwesibini;
(4) Sebenzisa umatshini wokugcwalisa ukugcwalisa ulwelo ngokwamanani, oluchaneke ngakumbi kunendlela yokufunxa yabasebenzi bezonyango;
(5) Ukubonisa igama leziyobisi ngokuthe ngqo kwisitya senaliti, ekungekho lula ukuyenza eklinikhi; Ukuba ileyibhile kulula ukuyicima, kuyanceda ukugcina ulwazi lokusetyenziswa kweziyobisi kwizigulana.
(6) Kulula ukusebenza kwaye kugcina isiqingatha sexesha eklinikhi kunokusebenzisa ii-ampoules, ezifanelekileyo ngakumbi kwizigulana ezingxamisekileyo.
Luluphi uluhlu lokusetyenziswa kweSirinji egcwalisiweyo?
(1) ukusetyenziswa kwenaliti: thatha isirinji ekhethiweyo enikezelwa ngamashishini amayeza, susa ukupakishwa kwaye utofe ngqo. Indlela yenaliti iyafana naleyo yesirinji eqhelekileyo.
(2) Emva kokususa ukuphakheja, inaliti yokugungxula ehambelana nayo ifakwe kwintloko yekhowuni, kwaye ukuhlanjwa ekusebenzeni kotyando kunokwenziwa.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zomatshini wesirinji okhethiweyo ovela kwi-IVEN Pharmatech, oomatshini besirinji abakhethiweyo abachongwe yinkqubo yemveliso kunye namandla.
Ukutya okwenziwe ngesirinji ngaphambi kokugcwaliswa kunokwenziwa ngeendlela ezizenzekelayo kunye nendlela yezandla.
Emva kokuba isirinji ekhethiweyo ifakwa kumatshini, iyagcwalisa kwaye itywinwe, emva koko isirinji ekhethiweyo inokuhlolwa ngokulula kwaye ibhalwe i-intanethi, ethi yona ilandelwe ukuntywila ngokuzenzekelayo. Kude kube ngoku isirinji ekhethiweyo inokuziswa kwi-sterization kunye nomatshini wokupakisha we-blister kunye nomatshini we-cartoning wokupakisha ngakumbi.
Amandla aphambili esirinji ekhethiweyo yi-300pcs / hr kunye ne-3000pcs / hr.
Umatshini wesirinji okhethiweyo unokuvelisa imiqulu yesirinji njenge-0.5ml / 1ml / 2ml / 3ml / 5ml / 10ml / 20ml njl.
Ukuqaliswa kwezibonelelo zemveliso
Umatshini wesirinji okhethiweyo uyangqinelana nesirinji esele igqityiwe, kunye nazo zonke iimveliso ezenziwe ngokwezifiso. Ixhotywe ngololiwe waseJamani wokuqala ocacileyo ohamba ngololiwe kwaye akukho sondlo. Iqhutywa ziiseti ezi-2 zee-servo motors ezenziwe yiJapan YASUKAWA.
Ukucoca iplagi, ukunqanda amasuntswana amancinci kubundlobongela ukuba i-vibrator isetyenziselwa ukumisa irabha. Ukucoca kulungelelaniswa ngendlela engenantsingiselo.
Ukuprintwa kweeparameter zenkqubo, idatha yoqobo igcinwe.
Zonke izinto zokunxibelelana zii-AISI 316L kunye nerabha yamayeza yesilicon.
Ukuchukumisa isikrini ukubonisa yonke imeko yokusebenza kubandakanya uxinzelelo lwe-vacuum yexesha, uxinzelelo lwe-nitrogen, uxinzelelo lomoya, iilwimi ezininzi ziyafumaneka.
I-AISI 316L okanye iimpompo zokujikeleza ngokuchanekileyo ze-ceramic ziqhutywa zii-servo motors. Cwangcisa kuphela useto lokuchukumisa ulungiso oluchanekileyo oluzenzekelayo. Impompo nganye yepiston inokulungiswa ngaphandle kwesixhobo.
Ukuzalisa uMqulu 0.5ml, 1ml, 1-3ml, 5ml, 10ml, 20ml
Inani leNtloko yokugcwalisa Iiseti ezili-10
Umthamo 2,400-6,00 iisirinji / iyure
Y Umgama wokuhamba Ngama-300 mm
Initrogen 1Kg / cm2, 0.1m3 / min 0.25
Uxinzelelo lomoya 6kg / cm2, 0.15m3 / min
Ukunikezwa Amandla 3P 380V / 220V 50-60Hz 3.5KW
Ubukhulu I-1400 (L) x1000 (W) x2200mm (H)
Egqithileyo Ibhotile yeglasi IV Isisombululo semveliso
Okulandelayo: Ibhotile yeglasi eyi-30ml yokuGcwalisa isiraphu kunye noMatshini wokuPakisha woNyango
Uluhlu lweMveliso yoTywala lweMveliso (Artemisinin ex ...
Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina, Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led,